अर्जेन्टिनाको जंगलमा एलियन भेटिएपछि… - IAUA
अर्जेन्टिनाको जंगलमा एलियन भेटिएपछि…
ramkrishna October 8, 2017	अर्जेन्टिनाको जंगलमा एलियन भेटिएपछि…
त्यसो त उडन्त तस्तरी एवं एलियनको बारेमा खास रहस्य खोतलिएकै छैन । यो वास्तविकता हो वा भ्रम, त्यसबारे पनि अझै स्पष्ट छैन । यद्यपि बेलाबखत यिनै बिषयले हंगामा मच्याउँछ । जस्तो कि, हालै अर्जेन्टिनाको जंगलमा प्रहरीले एलियनसँग साक्षतकार गरेको खबरले सनसनी मच्याएको छ ।
एक प्रहरी अफिसरका अनुसार घना जंगलको मध्यतिर पुगेपछि एक छायाँ देखा परे, त्यो पूर्ण रुपमा एलियन जस्तै थियो । त्यहाँ गस्तीमा रहेका प्रहरीहरु डराए । उक्त जंगलमा अनौठो घटनाहरु हुन थालेको सूचनाको आधारमा प्रहरी पुगेको थियो, खोजतलासको लागि । जब प्रहरीले जंगलमा खोजतलास सुरु गरे, अनौठो छायाँ देखा पर्‍यो । यहि समय एक प्रहरीले आफ्नो क्यामेरा अन गरे, जसमा अनौठो छायाँ स्पष्टसँग देखियो । त्यो दुरुस्तै एलियन जस्तै रहेको उनीहरुको दावी छ ।
सबैभन्दा पहिला बच्चाले देखेका थिए
पार्कको नजिक बस्ने केहि बच्चाले उक्त दृश्य देखेको दावी गरेका छन् । बच्चाका अनुसार जंगलमा उनीहरुले त्यही छायाँ देखे र डरले भागे । त्यसपछि नै प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा खोजतलास गरेको थियो ।
युएफओका शोधकर्ता म्यालकोलम रबिन्सनले यस घटनापछि भनेका छन्, अब यो घटनापछि हामीले विश्वास गर्नैपर्छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ कि, एलियन धर्तीमा आइरहेका छन् । पछिललो घटना त्यसैको प्रमाण हो ।
Previous Previous post: हेर्नुहोस् दुनिँयाको सबभण्दा महँगो पानी, जसको एक बोतलकै १ करोड रुपैयाँमा कारोवार हुन्छ !!!
Next Next post: दाम्पत्य जीवन सधैँ सुमधुर रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यस्तो वास्तु उपाय गर्नुहोस्…